घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलइमामोग्लुबाट एर्दोगानमा च्यानल इस्तानबुल प्रतिक्रिया: एक व्यक्तिको हैन एक्सएनयूएमएक्स मिलियन मानिस
13 / 12 / 2019 34 इस्तांबुल, साधारण, च्यानल इस्तांबुल, राजमार्ग, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की
इमामोग्लुन्डन एर्दोगाना च्यानल इष्टानबुल प्रतिक्रिया एक व्यक्ति एक मिलियन मान्छे थाहा छैन
इस्तानबुल महानगरपालिकाका मेयर एकरेम इमामोलुले पत्रकारलाई भने, “कानाल इस्तानबुल गत हप्तादेखि एजेन्डामा छन। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन, तपाईंलाई उल्लेख गर्दै, भन्नुभयो: तपाई के भन्नुहुन्छ?, "म यहाँ बसेर काम नगरेको, रोजगारीको उत्पादन नगरी मेयरको रूपमा सेवा गर्ने चुनेको थिएन। म समाजको चासो र अधिकारको रक्षा गर्नका लागि मेयर चुनिएको थिएँ। 'तपाईं बस्नुहोस्,' वाक्यको अर्को कथन, 'मलाई राम्रोसँग थाहा छ' का मतलब। मलाई लाग्छ 16 मिलियनलाई राम्रोसँग थाहा छ ..
इस्तानबुल महानगरपालिका (आईएमएम) का अध्यक्ष एकरेम इमामोग्लु, एएसएनयूएमएक्स बजेटलाई सभाको बैठकले पत्रकार, एजेन्डा र सत्रका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि स्वीकृत गरियो। इमामोग्लूले सोधेका प्रश्नहरू र आईएमएम राष्ट्रपतिले दिएका उत्तरहरू निम्न थिए:
“म बस्न आइनँ”
च्यानल इस्तानबुल गत हप्ता देखि एजेन्डा मा छ। राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगानले पनि तपाईंलाई आलोचना गरे। 'ख्याल राख्नुहोस्' तपाईंको आलोचना भयो। एर्दोगानको आलोचनाबारे तपाई के भन्नुहुन्छ?
श्री मेयरको मेयर भएको धेरै बेर भयो। नगरपालिका कानून 18। अनुच्छेद, "मेयर; नगरपालिका, नगरपालिका र नगरपालिकाको अधिकारलाई उनीहरूको हितमा रक्षा गर्दछ। ” त्यसकारण, मलाई थाहा छैन कुन मेयरहरूले सिट व्यवसायसँगै काम गरे। मलाई थाहा छैन कि यस्तो परम्परा भएको छ कि छैन, यो इस्तानबुलको बारेमा हो। तर म यहाँ बसेर, काम नगरेर, रोजगारीको उत्पादन गरेर मेयर बन्नको लागि चुनेको थिइनँ। म समाजको चासो र अधिकारको रक्षा गर्नका लागि मेयर चुनिएको थिएँ। 'तपाईं बस्नुहोस्,' वाक्यको अर्को कथन, 'मलाई राम्रोसँग थाहा छ' का मतलब। मलाई लाग्छ 16 मिलियनलाई राम्रोसँग थाहा छ। यस अर्थमा, म अन्तमा प्रक्रिया अनुसरण गर्नेछु। म समाजको हितको लागि काम गर्ने छु। र म यो सुनिश्चित गर्न गइरहेको छु कि 16 लाखौं व्यक्तिहरूले यस अन्तमा जानकारी प्राप्त गर्छन्। हामी व्यक्तिबाट फाइदा लिनेछौं जसले यस व्यवसायलाई राम्ररी जान्दछन्। हामी यसलाई सार्वजनिक रूपमा ठूलो स्वरले बोल्ने छौं। हामी समाजको निर्णय लिनेछौं, समाजको फाइदाको साथ, समाजसँग र साझा कारणका साथ। हामीले यी सबै गर्नुको कारण, वास्तवमा, हामीले दिएको छनौटको सबैभन्दा मूल्यवान् अंश हो, चुप लागेर, कुराकानी गर्न। सबैले कुरा गर्छन्। म उनीहरूको प्रतिनिधि भएर बोल्छु। जो कोही यसको प्रयोग गर्न चाहँदैन, यसको प्रयोग गर्नु पर्छ। हामी अझ बढी सुन्नेछौं।
प्रोजेक्ट हामी इस्टानबुललाई धोका दिनेछ भन्ने प्रोजेक्टमा 'हो' भन्दैनौं -
राष्ट्रपति एर्दोकानले हिजो कानाल इस्तानबुलको बारेमा भनेका थिएः अकाक यसले विश्वमा ठूलो सफलता ल्याउनेछ। हामी CHP वेज नीतिमा पेश गर्दैनौं। सबै कुराको बाबजुद, 2023 हाम्रो लक्ष्यहरू मध्ये एक हुने छैन के तपाईं यस मुद्दालाई विचार गर्नुहुन्छ?
हामी इस्तानबुलका जनतालाई धोका दिनेछौं यदि कोही गर्छ भने, भोली कुनै पनि परियोजनामा ​​पश्चाताप गर्नेछ, 'हो' भन्दैन।
बजेटमा, एके पार्टीले भूकम्पको तयारीमा काम गरेको कुरालाई आलोचना गरिएको थियो जुन गत वर्षको तुलनामा 65 प्रतिशत कम छ। किन तल्लो शेयर बाँडियो?
हाम्रो विभागको बाहेक, जसले हाम्रो संस्था भित्र भूकम्प प्रक्रिया सञ्चालन गर्दछ, हामीसँग बिभिन्न संस्थाहरू, संगठनहरू र सहायक कम्पनीहरू छन् जसले KPPŞ जस्ता गहन बजेट हस्तान्तरण गर्दछन्। यहाँ, AK पार्टी समूहको आलोचनाको अर्को बिन्दु छ। यो महसुस गर्न महत्वपूर्ण छ, यो बजेटमा लेख्नु हुँदैन। हामीले बजेटमा के हुँदैछ भनेर हेर्नु पर्छ। 10 को स्तरमा के भनियो भन्दा धेरै बजेट छ, मलाई लाग्छ। त्यसकारण, हामीले यो संख्या यस वर्षको बजेटमा लेखेका छौं। भूकम्प र अन्य मुद्दाहरूलाई हेर्दा इस्तानबुलमा बजेट तयार गर्न कठिनाईहरू छन्। हामी दर्जनौं निर्माण साइटहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौं। एक बर्ष भन्दा बढीको लागि, 1.5-2 वर्षौंदेखि उभिरहेको छ, निर्माण साइटहरूलाई धम्की दिँदै। हामी यो बोझ र उनीहरूका विवरणहरू समुदायसँग 23 डिसेम्बरमा साझा गर्दछौं। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामीले एक बजेट तयार गर्नुपर्‍यो जुन एकतर्फी यी प्रक्रियाहरू सम्पन्न हुने र अर्कोतिर यी प्रक्रियाहरूको समाप्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने क्रममा बराबर बजेट र bण लिन सक्ने क्षमतामा सन्तुलन हुने थियो। हामी सोच्दछौं कि हामी कसैलाई नपुंसक बनाउन र समाजलाई धोका दिन 2020 सही तरिकाले प्रबन्ध गर्नका लागि सही बजेट तयार गर्दैछौं। सहि बजेट पनि सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो। म AK पार्टी, MHP र हाम्रो गठबन्धन GOOD पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सबै ट्रेडर प्रक्रियाहरू सुरु भएको सOR्कलन प्रक्रिया प्रक्रियाहरू "
फोहोर पानी यातायात को टेन्डर गत वर्षको तुलनामा आधा मूल्य फरक भयो। किन यो काम गत वर्ष2ठोस मूल्यमा भयो?
यदि तपाईं दिमागमा सबै प्रश्न चिन्ह छन् भने, तपाईंसँग मेरो स्पष्ट निर्देशनहरू छन्। मेरा साथीहरूले यी सबै टेन्डर प्रक्रियाहरूमा अनुसन्धान शुरू गरिरहेका छन्। अर्को शब्दमा, हामी छनौट भएका छौं किनकि हामी त्यस्तो सरकार बन्ने छैनौं जुन विगतको बारेमा कुरा गर्दैन, त्यो हो, जसरी हामी आजका मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्दछौं। त्यसकारण यी प्रक्रियाहरूको प्रशासनिक प्रक्रियाहरू शुरू र अनुगमन गरिनेछ। निस्सन्देह, हामी एक टेन्डर समाप्त हुनु अघि retrospective जांच मा फर्कन सकेनौं। एक वर्ष पहिले कसरी टेंडर भयो? हामीसँग उनीहरूको आलोचना गर्ने मौका थिएन, तर अब यो डाटा हाम्रो अर्को कंक्रीट डाटा हो। अब, अवश्य हामी यसलाई हेर्नेछौं। यसबाहेक तपाईं बीचमा टर्की गरेको साँच्चै एक महत्वपूर्ण फरक लागत वृद्धि राख्नु गर्दा।
येन - हामीले भर्खरै आफ्नै टेन्डर सुरु गरेका छौं।
तपाईंले यो लिलामीबाट सबैभन्दा ठूलो बचत गर्ने कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ मध्यस्थहरु छन्? किन इकाई मूल्य उच्च छ?
टर्की, यो म भ्रष्टाचार किनभने सार्वजनिक क्षेत्र वर्णन छु प्रक्रिया को एक प्रतिबिम्ब छ। निश्चित रूपमा, हामीलाई थाहा छ कि एक्सएनयूएमएक्समा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता हामीले टेन्डरमा गर्नुहुने बचतको साथ फोहोरलाई रोक्नको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामी अहिल्यै यो भविष्यवाणी गर्दैछौं। वास्तवमा हामीले खर्च बजेटमा वास्तविक भिन्नताहरू छन् जुन हामीले राखेका छौं जुन समाजले अझै देखेका छैनन्। हामी, 2019 हजार वर्ग मीटर, गत अवधिमा पूरा भएको बजेट आईटम, 10 हजार वर्ग मीटर छ। हामीसँग यो गहिरो डेटा छ। हामीले भर्खर हाम्रो नयाँ युगको नयाँ टेन्डर सुरू गरेका छौं। हामी अहिले आफ्नै टेन्डरहरू गर्दैछौं र हामीले भर्खर सुरु गरेका थियौं, हामीले यस महिना शुरू गर्यौं। 13 जारी रहनेछ। हामी 2020 मा वास्तविक भिन्नताहरू देख्दछौं र हामी विगतलाई कहिले पनि बेवास्ता गर्दैनौं, हामी स्पष्ट रूपमा जाँच गर्नेछौं। हामी कानूनी अधिकार खोज्ने 2020 मिलियन मानिससँग सम्बन्धित अवधिको अनुभव गर्नेछौं। अन्यथा, तपाईं एक गैर-भ्रष्ट सार्वजनिक अवधिमा शामिल हुनुहुनेछ। हामी त्यस्तो प्रक्रियामा साझेदार हुन आएका छैनौं।
“विशेष बिदाइहरू प्रकाशित हुनेछन्”
के आईएमएममा सबैभन्दा बहस गरिएको विषयहरू एक लाइभ कार टेंडर हुनेछ?
हो, यो प्रत्यक्ष र पारदर्शी हुनेछ। वास्तवमा, यी शुरुआत हो। समयको साथ, हामी सकेसम्म सकेसम्म पूर्ण प्रवाहमा हाम्रा सबै खुला टेन्डरहरू दिने योजनामा ​​छौं। हामी प्रोसेसहरू कसरी परिपक्व हुन्छन् र उनीहरू कसरी हुन्छन् भनेर हामी सार्वजनिक रूपमा हेर्न चाहन्छौं। हामीले चाहेको पुनःस्थापना वा व्यवस्था एक क्षणमा हामीमा आउन सक्दैन, तर यस सम्बन्धमा हाम्रा प्रयासहरू छन्।
"बगेटलाई स्वागत छ"
भित्र व्यापक रूपमा आलोचना गरियो तर बजेट गरियो तर सर्वसम्मतिले स्वीकार गरियो। धेरै आलोचना गरिएको बजेट, 'हो' भनियो। यदि उनीहरूले 'होइन' भने भने बहुसंख्यक सभाले के हुन्छ?
एउटा तथ्य यो हो कि बजेट र संख्याहरूको वास्तविकता हुन्छ। मेरो जीवन यस संग पारित भयो। दुर्भाग्यवस, कसैले दाँया देखि बाँया बजेटहरू पढ्छ, कोहीले बायाँबाट दायाँ पढ्छ। एक शीर्ष-डाउन टिप्पणी गर्दछ, एक तल-माथि टिप्पणी गर्दछ। यस अर्थमा, तपाईंसँग विभिन्न टिप्पणीहरूको साथ बजेट वर्णन गर्ने उच्च संभावना छ। दुर्भाग्यवस, संख्यासँग त्यस्तो जादू छ। पक्कै पनि राम्रो छैन। हामी ISMEK मा बजेट पढ्ने र वित्त पठन प्रबन्धन पाठ्यक्रमहरू सुरू गर्नेछौं। किनभने वास्तवमा हाम्रा मानिसहरूका रूपमा, हामीलाई बजेटको अर्थ के हो भनेर धेरै थाहा छैन। एक आय र व्यय कथन, बराबर बजेट çoğu हामी एक साधारण को रूप मा एकदम साधारण शब्दहरु मा चासो छैन। यहाँ जे भनिएको छ त्यो संसदको भावनामा रहनु पर्छ। सम्मेलनको बजेट हामी सबैको लागि लाभदायक होस्।
3 मिलियन मान्छे 6,5 Storeyed महान इस्तांबुल सुरंग प्रयोग गर्नेछ
च्यानल इस्तांबुलले इमामोग्लुबाट मन्त्री तुर्हानलाई जवाफ दियो: मानिसहरूले २ 23 जुनमा परियोजना रद्द गरे
इमाग्नोग्लु अक्सेनर च्यानल इस्तानबुल भ्रमण
एकरेम İmamoğlu सैड च्यानल इस्तानबुल एक भाडा परियोजना हो
इस्तांबुलको रेल प्रणालीमा 20167लाखौं व्यक्तिद्वारा प्रयोग गरिनेछ
16 शुरुवात स्केयर र एक हराएको व्यक्तिले गार्मम्याम टोलीलाई बचाएको छ
Erdogan: Marmaray मात्र टर्की मा दुनिया मा हडताली छैन
İmamoğlu को एर्दोयन च्यानल इस्तानबुल प्रतिक्रिया